व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | Mar 16, 2017 | व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइ, उद्धरण |0|
1 व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइ
1.1 व्यक्तिगत विकास उद्धरण र रीसको बारेमा भनाइहरू
1.2 व्यक्तिगत विकास उद्धरण र चुनौतीहरू पार गर्ने बारेमा भनाइहरू
1.3 व्यक्तिगत विकास उद्धरण र मनोवृत्ति को बारे मा उक्ति
1.4 व्यक्तिगत विकास उद्धरणहरू र सफलता र असफलताको बारेमा भनाइहरू
1.5 व्यक्तिगत विकास उद्धरण र आत्म विश्वास / मित्रताको बारेमा उक्तिहरू
हामीले यस पृष्ठमा थपेका व्यक्तिगत विकास उद्धरणहरू तपाईंलाई सहयोगका लागि गरिएको हो जब तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै बुझ्न, प्रेरणा, समर्थन, सल्लाह र निर्देशन आवश्यक पर्दछ।
“तपाईलाई लाग्छ कि गर्न सक्नुहुन्छ
तिमी सही छौ।"
अचम्मै कुरा के छ भने मात्र हामी केवल केहि शब्दहरू पढ्दा सान्त्वना र प्रेरणा पाउन सक्दछौं जसले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यहरूतिर प्रेरणा दिन्छ; तिनीहरू जेसुकै होस्। एक महान व्यक्तिगत विकास उद्धरण हाम्रो विश्वास उठाउन सक्छ यदि हामी पीडित छौं कम आत्मसम्मान वा उदास मुडमा। एक मुस्कान कहिलेकाँही हामी सबै हामीलाई उठाउन र हामीलाई जारी गर्न विश्वास आत्म विश्वास दिन सबै आवश्यक छ।
केवल व्यक्तिगत विकास भनाइ वा आत्म सुधारको बारेमा उद्धरण पढ्नुभयो जसमा अन्य कसैले तपाईले महसुस गरिरहेको भावनाहरु, तपाईले खोजिरहनु भएको निर्देशन वा हास्यलाई उपेक्षित गर्न नसक्ने व्यक्त गर्नुभयो; एक साथीसँग कुराकानी वा व्यक्तिगत विकास कोचको साथ लामो सत्रको जत्तिकै प्रेरणादायक हुन सक्छ।
यहाँ यी व्यक्तिगत विकास उद्धरणहरूले कसरी मद्दत गर्न सक्दछन् यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। जब हामी रिसाउँछौं हाम्रो पहिलो प्रवृत्ति अक्सर बाहिर कुटपिट वा अर्को व्यक्तिको प्रति असन्तुष्टि महसुस हुन्छ। परिणाम यो छ कि हामी आफैंले आफैंलाई दण्ड दिइरहेका छौं। यसको सट्टा हामीले के गर्नुपर्दछ हाम्रो भावनाहरू स्वस्थ तरीकामा जारी गर्नु हो। उपयुक्त उद्धरण पढ्नुहोस् वा केहि लेख्नुहोस्, हिंड्नको लागि जानुहोस् - पञ्च बैगमा तपाईको निराशालाई पञ्च पनि पार्नुहोस्। त्यसोभए जब तपाई शान्त हुनुहुन्छ र रिसाउनुभएको छ, त्यो समय भनेको सकारात्मक तरीकाले सुल्झाउने समय हो।
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू गुस्सा
"रीसलाई पक्रिराख्नु भनेको कसैलाई जलाएर राखेको कोइलामा पक्रनु जस्तै हो - तपाई नै हुनुहुन्छ जो जल्नुहुन्छ।"
"हरेक मिनेट तपाई रिसाउनुहुन्छ, तपाईंले seconds० सेकेन्डको मानसिक शान्तिको त्याग गर्नुहुन्छ।"
राल्फ वाल्डो एमिर्सन
“म मेरो साथीसँग रिसाएको थिएँ, मैले आफ्नो क्रोधलाई भनें। मेरो क्रोधको अन्त भयो। म मेरो शत्रुसँग रिसाएको थिएँ, मैले यो भनेको थिइन। मेरो रीस बढेको छ। ”
"जसले बदला लिने छ, उसले दुई चिहान खन्नु पर्छ"
व्यक्तिगत विकास उद्धरणहरू र डरको बारेमा भनाइहरू
"जसले आफैं दु: ख भोग्नेछ भनेर डराउँछ, उसले आफ्नो डरको कारणले नै दुःख भोग्दछ।"
माइकल डी मोन्टाइग्ने
"के कुराले मलाई मार्दैन, मलाई बलियो बनाउँछ।"
“कसैले पनि आफ्नो धम्कीको जोखिमलाई पन्छाउँनु हुँदैन र त्यसबाट भाग्नु हुँदैन। यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं खतरालाई दोब्बर पार्नुहुनेछ। तर, यदि तपाई यो तुरुन्त भेट्नुभयो र फ्लिन्च नगरी तपाईले आधा खतरा कम गर्नुभयो। कुनै पनि कुराबाट कहिल्यै भाग्नु हुँदैन! ”
"साहस भनेको डरको प्रतिरोध हो, डरको निशाना हो - डरको अनुपस्थिति होइन।"
"साहस भनेको उठ्नको लागि बोल्नु नै हो, साहसी हुनु भनेको सँगै बस्न र सुन्न पनि लिनु हो।"
डर महसुस गर्नुहोस् र जे भए पनि गर्नुहोस्।
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू चुनौतीहरू आइपुग्छन्
कहिले पनि, कहिले पनि, कहिले पनि हार नमान्नुहोस्। "
"त्यहाँ गल्ती जस्ता चीजहरू छैनन्, केवल सिक्ने अवसरहरू।"
“जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ, अर्को खोलिन्छ; तर हामी प्रायः बन्द ढोकामा यति लामो र यति खेदपूर्वक हेर्छौं कि हाम्रो लागि खोलिएको ढोका हामी देख्न सक्दैनौं। ”
"गल्तीहरूको शर्म नगर्नुहोस् र यसरी तिनीहरूलाई अपराध बनाउनुहोस्।"
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र मनोवृत्ति को बारे मा उक्ति
“दिमाग प्यारासुट जस्तै छ; खोल्ने बित्तिकै यसले अझ राम्रोसँग काम गर्दछ! "
"पागलपन: फेरि एकै कुरा गरौं र विभिन्न परिणामहरूको आशा गर्दछ।"
"अधिकांश व्यक्तिहरू उनीहरूको दिमाग बनाइए जति खुशी छन्।"
"TelL म र म बिर्सन्छु, देखाउनु मलाई र म सम्झना गर्छु, जब म DO त्यसो भए म सिक्ने छु। ”
प्रत्येक दिन समाप्त र यसको साथ सम्पन्न। तपाईले सकेजति गर्नुभयो। केही गडबडी र बेतुकापनहरू निस्सन्देह क्रिप्टमा; तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो बिर्सनुहोस्। भोलि नयाँ दिन हो; यसलाई राम्रोसँग र शान्तसँग शुरू गर्नुहोस् र तपाईंको आत्माको साथ तपाईंको पुरानो मूर्खताले समात्न सकिन्छ।
"कसैले तपाईंलाई तपाईंको सहमति बिना कमजोरी महसुस गर्न सक्दैन।"
"यदि हामीले दिशा परिवर्तन गरेनौं भने, हामी कहाँ जाँदैछौं अन्तमा जान हामी उत्तरदायी छौं।"
"तपाईं जो हो, राम्रो हुनुहोस्।"
“मानिस त उसको विचारको फल हो। ऊ जे सोच्छ, ऊ हुन्छ। ”
"तपाई जे गर्न सक्नुहुन्छ वा सपना देख्नुहुन्छ, यसलाई सुरु गर्नुहोस्।"
“उत्साह र लगनशीलता एक औसत व्यक्ति राम्रो बनाउन सक्छ। उदासीनता र सुस्ती एक उच्च व्यक्ति औसत बनाउन सक्छन्। "
"कल्पना ज्ञान भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ…"
"कठिन समय टिकाउँदैन, कठोर व्यक्तिहरू गर्छन्।"
“जब म निराश हुन्छु, मलाई याद छ कि इतिहासभरि सत्य र प्रेमको मार्ग जित्दछ। त्यहाँ निरंकुश र हत्याराहरू छन् र एक समयको लागि तिनीहरू अजेय लाग्न सक्छ, तर अन्तमा तिनीहरू सँधै पतन हुन्छन्… ..सर्वे… ”
“प्रत्येक दिन समाप्त गर्नुहोस् र योसँगै गर्नुहोस्। तिमीले सकेजति गर्यौ। ”
"म तयार गर्नेछु र केहि दिन मेरो मौका आउनेछ।"
"हजारौं माईलको यात्रा एकल चरणबाट सुरू हुन्छ।"
"यदि तपाईंले सत्य बोल्नुभयो भने तपाईंले केही पनि बिर्सनु हुँदैन।"
"सत्य भनेको अनुभवको परिक्षा हो।"
"बाटो जान सक्ने ठाउँमा नजानुहोस्, सडक नभएको ठाउँमा जानुहोस् र एउटा ट्रेल छोड्नुहोस्।"
"तपाईले नरोक्नु भए पनि तपाईले यत्ति लामो समयसम्म जानु कत्ति फरक पर्दैन।"
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू सफलता र असफलता
"सफलता भनेको कुनै असफलताको साथ अर्को असफलतामा जाने क्षमता हो।"
“सुत्ने बित्तिकै कुनै गल्ती हुँदैन। गल्ती गर्ने डर भनेको नोकरशाहीको जड र विकासको शत्रु हो। ”
इंग्वार कम्प्रद, Ikea 1976 को प्रमुख
"तपाइँको सफलता को संभावनाहरु तपाइँ खुशी के डिग्री को सीधा आनुपातिक छ तपाइँ के काम बाट व्युत्पन्न। यदि तपाइँ घृणा गर्ने जागिरमा हुनुहुन्छ भने, तथ्यलाई चारैतिर सामना गर्नुहोस् र बाहिर निस्किनुहोस्। "
"हाम्रो सबैभन्दा ठूलो महिमा कहिल्यै पतन मा छैन, तर हामी हरेक पटक उठेर।"
"जीवनका प्राय: असफलताहरू ती मानिसहरू हुन् जसले आफूले छोडेको सफलताको नजिक रहेको महसुस गरेनन्।"
थोमस एल्भा एडिसन
"विगतबाट सिक्नुहोस, आजको लागि जिउनुहोस, भोलिको लागि आशा राख्नुहोस। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रश्न गर्न रोक्न होइन। "
"ठुलो सोच्नुहोस् र मान्छेलाई नसुन्नुहोस् जसले तपाईंलाई भन्छ कि यो गर्न सकिन्न। सानो सोच्नको लागि जीवन एकदम छोटो छ। ”
यदि हामी सँधै पछाडि दृश्य ऐनामा हेर्छौं भने अगाडीको बाटोमा हाम्रो आँखा राख्नु गाह्रो छ।
“निराशावादी हरेक अवसरमा कठिनाई देख्दछन्। आशावादीले सबै कठिनाइहरूमा अवसर देख्दछन्। ”
"तपाईले गर्न नसक्ने कुरा कहिल्यै गर्न नदिनुहोस् तपाईले गर्न सक्ने कुरा गर्नबाट रोक्नुहोस्!"
"अरूले के सोच्दछन् भनेर तिमी यति चिन्तित हुदैनौ यदि उनीहरूले विरलै अनुभव गरे भने।"
“सही मानसिक दृष्टिकोण राख्ने मानिसलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नबाट कुनै कुराले रोक्न सक्दैन; पृथ्वीमा कुनै पनि कुराले मानिसलाई गलत मानसिक दृष्टिकोणले सहयोग गर्न सक्दैन। ”
“यदि तपाईंलाई केहि मनपर्दैन भने, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने, आफ्नो मनोवृत्ति बदल्नुहोस्! ”
"ठूलो शट र सानो शट बीचको भिन्नता केवल यो हो कि ठूलो शट मात्र शूटिंगमा राखिएको सानो शट थियो।"
“शान्त पुरुषहरू भाग्यमा विश्वास गर्छन्। कडा पुरुषहरू कारण र प्रभावमा विश्वास गर्छन्। ”
"जो कोही पनि जान्न रोक्छ पुरानो हुन्छ, चाहे 20 वा 80 मा। जोसुकै सिक्ने मानिस नै रहन्छ। ”
"केहि गर्न कोसिस गर्ने र असफल हुने मानिसहरु केहि गर्न को लागी प्रयास गर्ने र सफल भन्दा असीम राम्रो छन्।"
“मलाई लाग्छ हामी असफलताको बारेमा धेरै चिन्ता गर्दछौं। मलाई लाग्दैन कि असफलताले प्राय जसो कसैलाई चोट पुर्‍याउँछ। यो असफलताको डरले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्दछ। ”
"कुनै ठूलो कुरा कहिल्यै उत्साह बिना हासिल भएको थिएन।"
"ठूलो उपलब्धी सामान्यतया ठूलो त्यागबाट जन्मेको हुन्छ, र यो स्वार्थको नतिजा होइन।"
"कुनै पनि महान् पुरुषले कहिल्यै अवसरको अभावको गुनासो गर्दैनन्।"
"सफलताको मानिस बन्नको लागि होइन बरु मूल्यवान् मानिस बन्ने प्रयास गर्नुहोस्।"
"सधैं मनमा राख्नुहोस् कि सफल हुनको लागि तपाईंको आफ्नै संकल्प कुनै पनि चीज भन्दा महत्त्वपूर्ण छ।”
“सफल हुनु भनेको पैसा भएकोमा हुँदैन। यो तपाइँको जीवनलाई कसरी जीउने भनेर छनौट गर्ने स्वतन्त्रताको बारेमा हो, तपाइँ के गर्न मन पराउनुहुन्छ। "
"आज भोलि यो काम गरेर तपाईं कलको जिम्मेवारी बचाउन सक्नुहुन्न।"
"जहाँ तिमी जान्छौ, तिम्रो सारा हृदयमा जाऊ।"
“धेरै टाढा हेर्ने प्रयास गर्नु गल्ती हो। भाग्यको शृंखला एक पटकमा केवल एक लि gra्क समात्न सकिन्छ।
"हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी दिँदै छ। सफल हुने सबैभन्दा निश्चित तरिका सँधै एक पटक थप प्रयास गर्न सजिलो छ। "
थमस ए एडिसन
"भएका कुराहरू, यो कुरा गर्न अनावश्यक छ ... बिगतका चीजहरू, यो दोष दिन अनावश्यक छ।"
“हामीले यथासक्दो गर्ने पर्याप्त छैन; कहिलेकाँही हामीले चाहिएको कुरा गर्नु पर्छ। "
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू आत्म विश्वास / मैत्री
"मित्रताको व्याख्या गर्न सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। यो विद्यालयमा तपाईंले सिक्नुभएको कुरा होइन। तर यदि तपाईंले मित्रताको अर्थ बुझ्नुभएन भने, तपाईले साँच्चिकै केहि पनि थाहा पाउनु भएको छैन। "
"तपाईलाई लाग्छ कि गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईलाई लाग्छ कि तपाई सक्नुहुन्न, तपाई ठीकै हुनुहुन्छ।"
"मित्र एक हो जसको अगाडि म ठूलो सोच्न सक्छु।"
"हामीले पाएको कुराबाट जीवन निर्वाह गर्छौं, हामीले दिने कुराबाट जीवन दिन्छौं।"
“सत्य भनेको सबैले तपाईलाई चोट पुर्याउने छन्। तपाईंले भर्खरका कष्टहरू पाउन योग्यको पाउनुभयो। ”
"एक मित्र हुन एकमात्र तरिका एक हुनु हो।"
“कठिनाइले तपाईंको वास्तविक साथीहरू को हो भनेर सिकाउँछ।”
लोइस म्याकमास्टर बुजोल्ड
"मित्र एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले तपाइँको बारेमा सबै जान्दछ र तपाइँलाई अझै पनि प्रेम गर्दछ।"
"मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले ममा सब भन्दा राम्रो ल्याउनुहुन्छ।"
"हाम्रो जीवनको मुख्य चाहाना कोही हुनुहुन्छ जसले हामीलाई के गर्न सक्दछ।"
"आफ्नै लागि म एक आशावादी हुँ - यसले अरू केहि पनि भएको धेरै प्रयोग भएको देखिंदैन।"
"जब तपाईं केवल आफैंमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र तुलना वा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न, सबैले तपाईंलाई आदर गर्दछन्।"
हामी मध्ये कसैले पनि कहिल्यै उत्कृष्ट वा कमान्डिंगको काम गर्न सक्दैनौं जब बाहेक उसले एक्लै सुनेको सुनेको यो फुस्रो सुन्छ।
"एक व्यक्ति आफ्नै आफ्नै स्वीकृति बिना सहज हुन सक्दैन।"
पुरुषहरूमाथि भरोसा राख्नुहोस् र तिनीहरू तपाईंलाई पनि साँचो हुनेछ; उनीहरूसँग ठूलो व्यवहार गर्नुहोस्, र तिनीहरू आफैंले महान प्रदर्शन गर्नेछन्।
"सबै चीजहरुको यसको सुन्दरता हुन्छ तर सबैले देख्दैनन्।"
हाम्रो पछि के छ र हाम्रो सामने के छ नि?
"भगवान्‌को अगाडि हामी सबै उस्तै ज्ञानी - र समान मूर्ख छौं।"
“खुशी भित्री हो तर बाहिरबाट होइन; र त्यसैले यो हामीमा के भर पर्दैन, हामी केमा छौं। ”
हेनरी भ्यान डाईक
आफैंलाई धेरै बनाउनुहोस्, किनकि तपाईको सबै कुरा यही हो।
"आफैलाई आदर गर्नुहोस् र अरुले तपाईंलाई आदर गर्नेछन्।"
“भावना देखाउन कहिल्यै माफी माग्नुहोस्। जब तपाइँ यसो गर्नुहुन्छ, तपाइँ सत्यको लागि माफी माग्नुहुन्छ। "
"" चरित्र बुद्धि भन्दा उच्च छ ... एक महान आत्मा बाँच्न को लागी, र सोच्न को लागी बलियो हुनेछ। "
"अरूको धारणा तपाईको वास्तविकता हुन नदिनुहोस्।"
"बहसको उत्तम प्राप्त गर्ने एक मात्र तरिका यसलाई बेवास्ता गर्नु हो।"
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यी व्यक्तिगत विकास उद्धरणहरू सान्त्वनादायी, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण र जानकारीमूलक पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंसँग मनपर्ने उद्धरण छ भने, प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको प्रेरणादायक उद्धरणहरू, कुनै व्यक्तिगत विकास उद्धरण वा आत्म सुधार उद्धरणहरू थाहा पाउनुहोस् जुन तपाईंलाई लाग्छ हामीले थप्नु पर्छ, कृपया हामीलाई तलको टिप्पणी फारममा बताउनुहोस् र हामी तिनीहरूलाई समावेश गर्न पाउँदा खुसी हुनेछौं।
पछिल्लोधूम्रपान समस्या को लागी सम्मोहन
अर्कोव्यक्तिगत सहायक भूमिकाको लागि नमूना कभर पत्र